Ngubani uMartin Vrijland kwaye kutheni ebhala amanqaku? UMartin Vrijland ngumbhali-ntatheli, umbhali kunye nomphengululi ngoku one-webhusayithi enkulu eNetherlands yomntu ofuna inyaniso yokwenene. Ngo-2012 wayeka umsebenzi wakhe njengabaphathi bezentengiso bamanye amazwe kwaye wagqiba ekubeni enze isandi esahlukileyo. Xa […]
Umbono omtsha kunye ocacileyo!
Uvavanyo lwempumlo ye-coronavirus covid-19 lubuhlungu kakhulu kwaye mhlawumbi ithatha iDNA yakho
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Julayi 2020	• 11 Comments
Kutheni le nto uvavanyo lwe-Covid-19 kufuneka luphoswe nzulu ekhaleni? Kunzulu kakhulu ukuba abantu basabandezeleka yiyo emva kweentsuku. Ngelixa okwangoku wonke umntu ufakelwe imaski yomlomo, ngenxa yokuba intsholongwane ingaphefumla okanye ukukhohlela ngokukhohlela? Ke loo nto ayichanekanga kwaphela. Ukuba i-coronavirus ibisosulela kakhulu, […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 Julayi 2020	• 9 Comments
Akukho nto imfutshane ngokumangalisayo ukubona indlela abafundi bakaMartin Vrijland, abebesokola iminyaka esixhenxe enesiqingatha ngenxa yokuvuswa kwesimo samapolisa esingachazwanga, bayagxothwa kumanyathelo amatsha amatsha afana ne'Café Weltschmerz 'kunye' neMfazwe esele ilahlekile 'nguSven. Hulleman. UKarel van Wolferen, obalaseleyo kwezo ziteshi, uhoya […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Julayi 2020	• 18 Comments
Kolu shicilelo lwangaphambili lweli nqaku ndicacisa indlela le ngxoxo malunga neeromos, amaconsi amakhulu kunye nomgama oziimitha ezinesiqingatha kubonakala ngathi yingxoxo yokuphambuka eyondliwe nguMaurice de Hond kunye noWillem Engel, kuba bayawuphepha umbuzo ophambili, othi: “ Yintoni intsholongwane, isebenza njani intsholongwane kwaye […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Julayi 2020	• 10 Comments
Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi sinikela ubungqina ngeziganeko zesiprofetho, njengakwimeko yeenkuku ezifudukayo ngoku ezidla amasimi amakhulu okutya okuxabisekileyo kumazwekazi amathathu. I-coronavirus ibe nefuthe elikhulu kuqoqosho lwehlabathi, kwaye ibicaciswa rhoqo apha ukuba kubonakala ngathi i-coronavirus yayisisiqhelo kwi […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Julayi 2020	• 0 Comments
Kwabo basacinga ukuba intshukumo yaBantu abaMnyama yaBenza ukuba bavuseleleke okwethutyana ngenxa yokubulawa kukaGeorge Floyd kunye noqhankqalazo olwenzileyo kwihlabathi lonke, kuyacetyiswa ukuba ujonge le mifanekiso ingezantsi. Yayingomhla wokuzimela, nge-4 kaJulayi. Ngeli xesha, intombazana eneminyaka esibhozo ubudala nomnyama […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	2 Julayi 2020	• 6 Comments
Xa sijonga iingxelo zamazwe aphesheya, kubonakala ngathi inyani yesibini yecoronavirus isendleleni. Nokuba yinyani le coronavirus okanye umfuziselo wamanani kunye nemifanekiso yeHollywood yemidiya epheleleyo ye-ICs isengumbuzo. Umbuzo wokuba isasazeka njani i-coronavirus covid-19 […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Juni 2020	• 5 Comments
Mva nje bendisebenza nzima kwincwadi entsha ebizwa ngokuba yi 'Coronavirus covid-19 iphelele phi?' Ukuqhambuka kwe-coronavirus covid-19 yaba sisibetho esiqikelelweyo saye sazaliseka, njengokwazisa kwezixhobo zetekhnoloji endandilulindele. Incwadi ichaza ngokweenkcukacha ukuba yeyiphi iskripthi esikhulu esivelwayo kwaye ndiyenza njani le […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Juni 2020	• 1 Comment
Izitepsi zePenrose kukuxoka okubonakalayo okanye into engenakwenzeka eyasungulwa yingcali yezibalo yaseBritane kunye nesayensi yezonyango uRoger Penrose ngo-1958. Izitebhisi ezifanayo zakhulelwa ngaphambili ngumculi waseSweden uOscar Reutersvärd, kodwa wayengaziwa ngaphandle kweSweden. Kwizitepsi kubonakala ngathi kunokwenzeka ukuba ukhuphuke (okanye ezantsi) ukubuyela kwinqanaba elinye. Kwi […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Juni 2020	• 20 Comments
"Uthando, unyamezelo kunye nokuthembela". Ndandineminyaka eli-10 ubudala xa ndandiqhutywa luthando lweCawa kwaye ndiqonda ukuba uyakuthandwa xa unokuguqukela kwiNkosi. Xa ndagqiba kwelokuba ndingathandi, uthando ngokukhawuleza lwaphenduka kwisohlwayo. Kwesinye isilwanyana endi […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Juni 2020	• 6 Comments
Zenza ntoni izinto eziMnyama kuBomi boMnyama, i-LGBTI kunye nogonyo oluyimfuneko lwe-Covid-19? Ekugqibeleni imalunga nenguquko yabantu ibe kukungathathi cala ngokwesini, ibala elimibalabala, nelabantu. Makhe ndichaze. Bakhonkxe abakhwele bakho! Ngokubhekisele kum, kucacile kakhulu ukuba imijelo emhlophe ye-antiistocracy inoxanduva lweenkulungwane zoxinzelelo lwe […]
Utyelelo lulonke: 4.312.379
SalmonInClick op Ngaba ulahlekelwe yimfazwe? Okanye ngaba ngokwenene siza kuvuka kwaye sithathe inyathelo?
SalmonInClick op Uvavanyo lwempumlo ye-coronavirus covid-19 lubuhlungu kakhulu kwaye mhlawumbi ithatha iDNA yakho
Riffian op Uvavanyo lwempumlo ye-coronavirus covid-19 lubuhlungu kakhulu kwaye mhlawumbi ithatha iDNA yakho